Maandooriye Qamri ah oo ay qabteen Ciidamada Amaanka Garoowe oo la gubay – SBC
Maandooriye Qamri ah oo ay qabteen Ciidamada Amaanka Garoowe oo la gubay
Posted by Webmaster on January 31, 2012 Comments
Maxkamada darajada koowaad ee Gobalka Nugaal ayaa maanta xukuntay 65dhalo oo qamri ah Kuwaasi oo dhowaanta ay soo qabteen ciidamada ammaanka Gobalka Nugaal gaar ahaan Dagmada dangorayo kuwaasi oo ay maxkamadu ku xukuntay in goob fagaare ah lagu gubo .
Qamrigaani ayaa waxaa lagu gubay duleedka galbeed ee magaalada Garoowe ayna goob joog ka haayeen madax ka kala socotay ciidamada Policeka Puntland ,maamulka Gobolka Nugaal Iyo Dagmada Dangorayo oo iyagu ahaa kuwii gacanta ku soo dhigay qamrigaani .
Ugu horrayntiiba waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha Guud ee Ciidamadamada Policeka iyo asluubta Puntland Col.Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa sheegay in qamrigaani laga soo qabtay deegaan u dhow Budunbuto ayna soo sheegeen dadka deegaanku ayna wanaagsantahay in loo wada shaqeeyo sidaasi ayna waxwalba hagaagayaan hadii lawada shaqeeyo.
Guddoomiyaha gobalka nugaal C/xirsi Cali Qarjab oo isna kahadlay goobtii qamrigaasi lagu gubayay ayaa sheegay in loo waday kooxaha burcadbadeeda ah lkin ay waayeen halkii ay u marin lahaayeen ayna qayb ka ka tahay tani dhibaatada ay bulshada ku hayaan kooxaha Burcadbadeeda ahi.
Dhiniciisa waxaa isna nooga waramay xaaladaha ammaan iyo Howl galo ay muddooyinkii ay wadeen ciidamada ammaanka ee Dagmada Garoowe taliyaha saldhiga dhexe ee Dagmada Garoowe Aadan in howl galadaasi ay qayb ka yihiin qabqabashada muqaadaraadka iyo dadka wax u dhimaya ammaanka guud ee caasimada Puntland ee Garoowe.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii ay ciidamada ammaanka ee Gobalak nugaal soo bandhigeen Qamriga ay sheegeen in ay ku soo qabteen kooxo ganacsato ah oo iyagu ka ganacsada kala gudbinta Qamriga xukuna ay ku riday Maxkamada Gobalka Nugaal Waxaana muuqanaysay muddooyinkii danbe dadaal xoogan oo ay wadeen ciidamada ammaanka ee Gobalka Nugaal waxaana taas muujinaysay qabqabashada maandooriyayaasha iyo lacagaha faalsada ah ee ay gacanta ku soo dhigayaan ciidamada ammaanku iyagoona bulshada qaybaheeda kala gadisan ka cod saday in ay wanaajiyaan la shaqaynta laamaha ammaanka ee ciidamada .
Yuusuf Maxamed Maxamuud
SBC International- Garoowe